1 Samueri 19 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rekutanga raSamueri 19:1-24
Sauro anoramba achivenga Dhavhidhi (1-13)
Dhavhidhi anotiza Sauro (14-24)
19 Sauro akazotaura nemwanakomana wake Jonatani nevaranda vake vese kuti aida kuuraya Dhavhidhi.+ 2 Asi Jonatani mwanakomana waSauro aida Dhavhidhi+ chaizvo, saka Jonatani akaudza Dhavhidhi kuti: “Baba vangu Sauro vari kuda kuti uurayiwe. Ndapota chenjerera mangwana mangwanani, uende kunzvimbo yakahwanda woramba wakahwanda. 3 Ndichabuda ndoenda kunomira pedyo nababa vangu musango maunenge uri. Ndichataura nezvako kuna baba vangu, uye kana paine zvandinenge ndaona, chokwadi ndichakuudza.”+ 4 Saka Jonatani akataura zvakanaka nezvaDhavhidhi+ kuna baba vake Sauro. Akati kwavari: “Mambo ngaarege kutadzira muranda wake Dhavhidhi, nekuti haana kukutadzirai uye zvinhu zvaakakuitirai zvakakubatsirai. 5 Akaisa upenyu hwake pangozi* kuti auraye muFiristiya,+ zvekuti Jehovha akaita kuti vaIsraeri vakunde zvikuru. Imi makazviona, uye makafara chaizvo. Saka mungaitirei zvakaipa kuropa risina mhosva nekuita kuti Dhavhidhi aurayiwe pasina chikonzero?”+ 6 Sauro akateerera zvakataurwa naJonatani, uye Sauro akapika achiti: “Chokwadi naJehovha mupenyu, haazourayiwi.” 7 Pashure paizvozvo Jonatani akashevedza Dhavhidhi akamuudza zvinhu zvese izvi. Saka Jonatani akaenda naDhavhidhi kuna Sauro, uye akaenderera mberi nekumushandira sezvaaimboita.+ 8 Nekufamba kwenguva, hondo yakatangazve, uye Dhavhidhi akabuda akaenda kunorwa nevaFiristiya akauraya vaFiristiya vakawanda chaizvo, uye vakamutiza. 9 Mweya wakaipa waibva kuna Jehovha wakauya pana Sauro+ paakanga akagara mumba make aine pfumo muruoko rwake, Dhavhidhi achiridza mumhanzi parudimbwa.+ 10 Sauro akaedza kubayirira Dhavhidhi kumadziro nepfumo, asi iye akatiza Sauro, uyo akabayirira pfumo racho kumadziro. Usiku ihwohwo, Dhavhidhi akatiza akapukunyuka. 11 Gare gare Sauro akatuma vanhu kuti vanogarira Dhavhidhi pamba pake vomuuraya mangwanani,+ asi Mikari mudzimai waDhavhidhi akamuudza kuti: “Kana ukasatiza* nhasi usiku, mangwana uchaurayiwa.” 12 Mikari akabva angoita kuti Dhavhidhi aburuke nepahwindo, kuitira kuti atize arege kuurayiwa. 13 Mikari akabva atora chidhori akachiisa* pamubhedha, uye akaisa mambure emvere dzembudzi paitsamirwa naDhavhidhi, uye akachifukidza nenguo. 14 Sauro akabva atuma nhume kuti dzinotora Dhavhidhi, asi iye akati: “Ari kurwara.” 15 Saka Sauro akatuma nhume dzacho kuti dzinoona Dhavhidhi uye akadziudza kuti: “Uyai naye kwandiri ari pamubhedha wake kuti aurayiwe.”+ 16 Nhume dzacho padzakapinda, dzakawana pamubhedha paine chidhori,* uye paitsamirwa naDhavhidhi paine mambure emvere dzembudzi. 17 Sauro akati kuna Mikari: “Wandinyengedzerei kudai uchisiya muvengi wangu+ achitiza?” Mikari akabva ati kuna Sauro: “Ati kwandiri, ‘Ndisiye ndiende, ukasadaro ndinokuuraya!’” 18 Dhavhidhi akanga atotiza, apukunyuka, uye akasvika kwaiva naSamueri kuRama.+ Akamuudza zvese zvaakanga aitirwa naSauro. Iye naSamueri vakabva vaenda, vakagara muNayoti.+ 19 Kwapera nguva, Sauro akaudzwa kuti: “Dhavhidhi ari muNayoti kuRama.” 20 Sauro akabva angotuma nhume kuti dzinobata Dhavhidhi. Padzakaona vaprofita vakwegura vachiprofita uye Samueri akamira achivatungamirira, mweya waMwari wakauya panhume dzaSauro, dzikatangawo kuita sevaprofita. 21 Pavakaudza Sauro, akabva atuma dzimwe nhume, naidzowo dzikatanga kuita sevaprofita. Saka Sauro akatumazve dzimwe nhume, boka rechitatu, uye naidzowo dzakatanga kuita sevaprofita. 22 Iyewo akazoenda kuRama. Paakasvika pamugodhi mukuru wemvura uri kuSeku, akabvunza kuti: “Samueri naDhavhidhi vari kupi?” Vakapindura kuti: “Vari muNayoti+ kuRama.” 23 Sauro paakanga achibva ipapo achienda kuNayoti kuRama, mweya waMwari wakauyawo paari, uye akafamba achiita semuprofita kusvikira asvika muNayoti kuRama. 24 Akabvisawo nguo dzake, uye naiyewo akaita semuprofita pamberi paSamueri, uye akarara ipapo asina kupfeka* zuva iroro rese neusiku hwacho hwese. Ndokusaka vachiti: “Sauro mumwe wevaprofita here?”+
^ Kana kuti “Akabatira mweya wake mumaoko.”
^ Kana kuti “Kana ukasapukunyutsa mweya wako.”
^ Kana kuti “terafimu akaiisa.”
^ Kana kuti “paina mwari wemumba; terafimu.”
1 Samueri 19